ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Double Taxation Avoidance 2
“ရန်ကုန်ပြန်ဖို့အခွန်ဆောင်ဖို့ငွေမလောက်လို့ ဘဏ်ကအတိုးနဲ့ဆွဲရဦးမယ် တူမကြီးရေ”
“အခွန်ဆောင်ဖို့အတွက် စုနေတာ ဘာမှမ၀ယ်နိုင်သေးပါဘူး ညီမရယ်”
“ရတဲ့လစာနဲ့ ၊ ပြန်သုံးရတာနဲ့ ၊ အိမ်ကိုထောက်ပံ့ရတာနဲ့ ၊ အခွန်နဲ့ မနိုင်ပါဘူး သမီးရယ်”
“နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး ပင်ပန်းကြီးစွာရှာရတယ်။ အိမ်ကိုတော့ ပြန်ပေးနိုင်တာပေါ့။ အခွန်လည်းဆောင်ပြီးရော ဘာမှမစုမိပါဘူး”
“ကျောင်းလည်းတက်ရသေးတယ်။ အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်။ အခွန်ပေးဖို့အတွက် ရှာရင်း ဘာမှမကျန်ပါဘူးကွာ”
“မြန်မာလူမျိုးကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ပေမယ့် bankrupt ဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေမှာ singaporean ခံယူလိုက်ရတာ အခွန်ကြောင့်ပါ ညီမရယ်”
ဇတ်ကားရိုက်ဖို့အတွက် သရုပ်ဆောင်လေ့ကျင့်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ဘ၀အဖြစ်အပျက်ကို စင်ကာပူက မြန်မာတွေရင်ဖွင့်နေကြသံတွေပါ .. ။ ဒီစကားသံတွေက လင်းလက်အတွက် မကြားမဖြစ် အမြဲလိုလို ကြားနေရတဲ့ စကားတွေဖြစ်သလို အခွန်ကြောင့် စင်ကာပူဘဏ်တွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေစီမှာ အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ .. ။ ဒါတွေက ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်တွေပါ.. ။ များသောအားဖြင့် ဒီမှာ သားသမီးတွေကိုကျောင်းထားတဲ့ မိဘတွေအတွက် မနိုင်မနင်းတော်တော်ဖြစ်ရပါတယ် .. ။ ကျောင်းစ၇ိတ်တွေအပြင် အထွေထွေသုံးစရိတ်တွေက တအားများတော့ တော်တော်လေးရုန်းရပါတယ်.. ။ “အခွန်အတွက်ဘ၀ပျက်”လို့ လင်းလက်က တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိတယ်။
စင်ကာပူနဲ့မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံးကို အခွန်မဆောင်ရဘူးလို့ သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ စာချုပ်ကို ၂၃ရက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ် .. ။ ဒီစာချုပ်ကြီးကို ခေါက်ထားပြီး နအဖအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရုံးတွေက ဘယ်လိုအခွန်ကောက်သလည်းဆိုတာ မှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်။
“အခွန်ပေးဆောင်ခွင့်ပြုပါ”ဆိုသော စာရွက်ကို လင်းတို့က ပထမဦးဆုံး သံရုံးမှာသွားလျှောက်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့က အခွန်မကောက်ပါဘူး .။ လင်းတို့က အားအားယားယား သွားပေးနေတာပေါ့နော် . ။ ဘယ်လောက် ကြွက်ကျလည်းဆိုတာကြည့် .. ။ မပေးရရင်မနေနိုင်လို့ပေါ့နော် .. ။ အဲဒီသဘောမျိုးပေါ့ .. ။ မနေနိုင်အောင်လည်း သူတို့ကစီမံထားပါတယ် ..။
“အခွန်မဆောင်ဘူးလား ရတယ်လေ။ passport ကို သက်တမ်းမတိုးပေးဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်ဝင်ခွင့် မရှိဘူး။ ရှင်းရှင်းလေး”
အဲဒီလို ကွိသွားမှာ .. ။ အစိုးရဘယ်လောက်ယုတ်မာမာ ၊ အစိုးရဘယ်လောက် လှည့်ပတ်ပတ် ၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်နေတဲ့ မြန်မာတွေက ဒုက္ခတွေကြားက ရုန်းကန်ပြီး ဒီအခွန်ကို နှစ်ကုန်ရင် မဖြစ်မနေသွားဆော်ငရတယ်။ ၁ကျပ် ၂ကျပ်မို့ ၊ ၁၀ ၂၀မို့ ပြောနေတာလည်းမဟုတ်။ ကိုယ်ရတဲ့ လစာရဲ့ ၁၀%ကို ပေးရတယ်ဆိုတာထက် ဘာမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း ၊ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတာကို ရင်နာတာများပါတယ် . ။
အခုဆိုရင် စင်ကာပူနိုင်ငံက GST 7% အထိတိုးကောက်တယ် .. ။ သူတို့ကောက်တဲ့အတွက် သူတို့ဘက်က ရှင်းလင်းချက်တွေ ၊ အကြောင်းပြချက်တွေ အကုန်လုံးကို လပေါင်းများစွာ လူထုကို ရှင်းပြပါတယ် .. ။ စင်ကာပူကို ဦးမခိုက်ပေမယ့် သူတို့အစိုးရရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေကို အရမ်းလေးစားရပါတယ် ( သူတို့လူမျိုးတွေရှေ့တော့မပြောဘူး ဟိး ) .. ။ စင်ကာပူက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ပေမယ့် သူ့နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တာတွေ ၊ စီးပွားရေးစနစ်တွေကို လင်းက တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ် .. ။ မြန်မာပြည် စင်ကာပူရဲ့ တစ်ဝက်ပဲ လက်မထောင်နိုင်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ သေတောင်လာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ။ စင်ကာပူအစိုးရက သူတို့နေရာကိုသာ လာမထိနဲ့ .. ။ ကျန်တဲ့နေရာတွေကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတာကိုက လင်းတို့အစိုးရနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတာပါ .. ။ ဒီမှာနေတဲ့လူတိုင်း သူ့ပညာ ရာထူးအဆင့်တန်းနဲ့ညီတဲ့ အလုပ်တွေရှိတယ် … ။ အဓိကက ဥပဒေပါပဲ .. ။ ဥပဒေ မရှိတဲ့နိုင်ငံက ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ကောင်းကင်ပြိုတောင် မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး .. ။ ဥပဒေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုံးဝ ဘက်မလိုက်ဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ စလုံးက အဲဒါတော့ လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် .. ။ ဒီနိုင်ငံက အရမ်းသေးတော့ လုပ်နိုင်တာလည်း ပါတာပေါ့ .. ။ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ လုံခြုံရေးကတော့ အထူးကောင်းပါတယ် .. ။ အဲဒီတစ်ဝက်ပဲ မြန်မာပြည်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာလို့ ခဏခဏစိတ်ကူးယဉ်မိတယ်.. ။ ဒီမှာက အစိုးရက ဖြစ်ချင်တာ များလွန်းနေတယ် .. ။ ပြည်သူက မလိုက်နိုင်ဘူး .. ။ မြန်မာပြည်မှာက ပြည်သူက အရှေ့ကပြေးနေတယ် .. ။ အစိုးရက နောက်ကနေ သေနတ်ကိုင်ပြီးပြန်ဆွဲထားတယ် .. ။ အဲဒီတော့ ရှေ့ကြိုးစားတိုးရင် နောင်က ရန်ကိုလည်းရှောင် ၊ ယက်ကန်ယက်ကန် အကုန်ဖြစ်နေကြတယ်.. ။
အခု ကိုနိုင်မိုးအောင်တို့က အခွန်အတွက်ကို စိတ်ရော ကိုယ်ရော အချိန်ရော အကုန်ကြိုးစားနေကြတာက သူတို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး .. ။ အားလုံးအတွက်ပါ … ။ သာမန်ကာပေါ့ပေါ့လေး မဟုတ်ဘဲ လေးလေးနက်နက် လူကြီးတွေအားလုံး ကြိုးစားနေတာက လေးစားဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ် .. ။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မှ ကျမရေးတတ်တယ်ဆိုတာတော့ စာဖတ်သူတွေအားလုံး ပိုသိမှာပါနော်.. ။
ဒီအခွန်ကိစ္စကိုတော့ လုံလောက်တဲ့သက်သေတွေနဲ့အတူ ဒီဘက်ကတော့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားကြမှာပါပဲ .. ။ အဓိကက စည်းလုံးရေးနဲ့ ဇွဲ ၊ ထောက်ခံအားပေးမှု .. ။ လိုအပ်တာဒါတွေပါပဲ … ။ နောက် အဲဒီနေ့က အဖွဲ့ထဲက ဦးလေးပြောတာ ကျမတော်တော်လေး သဘောကျမိပါတယ် .. ။
“အခွန်မဆောင်ခိုင်းတော့ဘဲ ငါတို့အားလုံးကိုတစ်ခြားနေရာမှာ ဒုက္ခပေးရင်ပြဿနာဆိုပြီး လူတွေက ကြောက်နေကြတာလည်းရှိတယ်”တဲ့ .. ။
နအဖစိတ်ဓါတ် ၊ ဒဏ်တွေကို လူထုက ကောင်းကောင်းသိနေတော့ ဒီစကားသံထွက်လာတာ မဆန်းပါဘူး .. ။ ကျမတို့က အခွန်အတွက် ဒါတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် တိုက်ခိုက်တာလို့လည်း ဆိုချင်ဆိုလို့ရပါတယ်.. ။ နောက်တစ်ချက် --- ဒီအခွန်ကိစ္စမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးလို့ မစခင်ကတည်းက အားမပေးတဲ့ လူအချို့ စလုံးမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါ .. ။ တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဝင်ရင် ရှုံးတယ် ၊ နိုင်တယ်က ပဓါနကျသလား .. ။ တိုက်ရဲတဲ့ လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိက ပဓါနာကျသလားး သေချာစဉ်းစားပေါ့နော် .. ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်လုပ်ရင်တော့ နိုင်ချင်တာပဲ .. ။ အစွမ်းကုန်လည်း ကြိုးစားမှာပဲ … ။ ကျမတို့လည်း ဒီကိစ္စမှာ မတရားတာကြီးကို ခေါင်းငုံ့ခံနေမယ့်အစား ရအောင် ကြိုးစားယူနေတာကို အသိမှတ်ဆိုတာ ပြုသင့်တယ်.. ။ မဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီးအားလျှော့တဲ့လူတွေ များနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က ဇောက်ထိုးဖြစ်နေမှာပဲ .. ။
ကိုနိုင်မိုးအောင်တို့ဘက်က သံမှုးကိုတွေ့ခွင့်အတွက် ခွင့်ပန်ခဲ့ပေမယ့် လူကြီးမဆန်တဲ့ ဟိုလူတွေက ပတ်ပြေးနေတာတော့ လူကြီးလူကောင်းနဲ့မတူဘဲ အကြွေးရှင်လာလို့ထွက်ပြေးနေတာနဲ့ တူပါတယ်.. ။ အခု ပြဿနာက ဖုန်းတောင်ဆက်မရတော့ဘူး .. ။ ဖုန်းလာရင် ဘာမေးမေးမရှိဘူးဘဲဖြေနေတာ ဒွတ်ခ .. ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ မှာတော့ Today newspaper က ကိုနိုင်မိုးအောင်တို့ကို interview ၀င်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် .. ။ မိတ်ဆွေတော်တော်များများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် .. ။ အခွန်ပြဿနာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းဌာနက jasmine မေးသမျှကို အားလုံးက အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပေးခဲ့တာတော့ အားရစရာပါ .. ။ တက်ရောက်သူတွေက အချင်းချင်း personally မသိတာများပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် အချင်းချင်းအတူတူ တက်ညီလက်ညီဖြေကြားသွားတော့ ရင်ထဲမှာ အများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်. ။ တစ်နိုင်ငံလုံးသာ ဒီလိုမျိုးဖြစ်၇င် သိပ်ကောင်းမှာလို့ပဲ တွေးခဲ့မိပါတယ် .. ။
ဒီကိစ္စအတွက်လုပ်နေသူတွေကလည်း တစ်ခါပဲ ကောက်ရိုးမီးတောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ကြပါဘူး .. ။ ဆက်တိုက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကြိုးစားနေကြတာပါ .. ။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ဘက်ကလည်း ဒီကိစ္စကို လွယ်လွယ်လေး အေးဆေးသွားတောင်းဆိုရင် ထွက်ပြေးရှောင်မှာပါပဲ .. ။ ဘဘတို့အကြောင်းက နောကျေအောင် သိနေပါပြီ .. ။ စာတစ်စောင် ပေတစ်ရွက်ပဲ တင်ပြရင်တော့ အဲဒီစာကို ချောင်ထဲထိုးထားမှာပါပဲ . ။ စင်ကာပူကလည်း မြန်မာပြည်နဲ့ ပြဿနာတော့ ဖြစ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး .. ။ အဓိက သူတို့၂ဖက်လုံး ငြင်းမရတာက ဒီအခွန်ကိစ္စမတရားမှုကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ စကားပြောနေကြတာပါပဲ .. ။ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်ခြားနားတာလည်း မဟုတ်သလို ဆန့်ကျင်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး .. ။ ဥပဒေကို တသတ်မှတ်တည်းထားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိတဲ့ စင်ကာပူဘက်ကို ကိုနိုင်မိုးအောင်တို့ဘက်က လေးလေးစားစားနဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ တွန်းအားပေးတောင်းဆိုတာ တော်တော်လေး နည်းလမ်းကျပါတယ် … ။ IRAS နဲ့ရအောင်ဆက်သွယ်ပြီး အချိန်တွေယူ ၊ case ကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့အောင် ကြိုးစားခဲ့တာလည်း တကယ်လေးစားထိုက်ပါတယ် .. ။
စင်ကာပူသတင်းဌာနဘက်က မေးတဲ့ မေးခွန်းကလည်း တော်တော်လေး သဘာဝကျပါတယ် .. ။ “ဘာလို့ စင်ကာပူဘက်ကို တောင်းဆိုပြီး မြန်မာဘက်ကို မဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလည်း”တဲ့ .. ။ ရုတ်တရက် သူများတော့ မသိဘူး .. ။ လင်းတော့ ခဏ တွေသွားတယ် .. ။ အဲဒီနေရာမှာ ကျမ ကိုနိုင်မိုးအောင်ကို တော်တော်လေးချီးကျူးမိပါတယ် .. ။ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို လှလှပပစကားနဲ့ ဒတ်ခနဲ ချက်ချင်းပြန်ဖြေတတ်တာပါပဲ .. ။ သူသုံးတဲ့ စကားအသုံးနှုန်းက လုံးဝ ဘောင်မကျော်ဘဲ မေးတဲ့သူ ရှောင်ကွက်မရှိအောင် ပြန်ဖြေတဲ့အတွက် မြန်မာသံရုံးကလူတွေလည်း သူ့ကိုမတွေ့ရဲတာ ဖြစ်မှာပါ :D ။ တခြားတက်ရောက်တဲ့ အကိုတွေ ၊ ဦးလေးတွေလည်း စကားပြောပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ လိုချင်တဲ့ point ကိုမိအောင် ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ။ confidence အပြည့်ရှိပြီး ဥပဒေနဲ့စကားပြောရင် အမှားလုပ်ထားသူက ရှောင်ကွက်မှမရှိတော့တာ … ။
စင်ကာပူမြေပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတယ် .. ။ စင်ကာပူဥပဒေကိုလည်း ယုံကြည်လေးစားသလို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ သံရုံးကလည်း ဒီနိုင်ငံမှာရှိတာကြောင့် စလုံးနယ်မြေပေါ်မှာ ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာဆိုတဲ့ စကားက တော်တော်လေးထိပါတယ် … ။ လေးစားပါတယ် .. ။
သံအမတ်တွေကို လေးလေးစားစား ပင့်ခေါ်နေတာ ဘိုးတော်က ရှောင်ပြေးပြီး အခုချိန်ထိ ကြွမလာသေးပါဘူး .. ။ အလုပ်များနေလို့မတွေ့နိုင်သေးဘူးလို့တော့ ပြောပါတယ် .. ။ ဘာအလုပ်များနေလည်းတော့ မသိပါဘူး … ။
စကားမစပ် ကျမ တခါတည်းထည့်ပြောချင်တာက ဒီအခွန်ကိစ္စစဆောင်ရွက်တုန်းက လွဲမှားတဲ့ သတင်းပေါင်းများစွာ ထွက်ရှိနေခဲ့ပါတယ် .. ။ နားလည်မှုလေးလွဲပြီး မြန်မာစကား ချော်သွားတာပါ .. ။ အဓိက ပြောချင်တာက ဒါကနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မလန့်ကြပါနဲ့ .. ။ ဒါတွေလုပ်နေတာကြောင့် အစိုးရက တစ်ခြားနေရာမှာ ပြဿနာရှာမယ်လို့ မဆီမဆိုင် ကြံဖန်တွေးပူနေတဲ့ လူကြီးမင်းများလည်း မလိုအပ်တာ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ .. ။ မြန်မာပြည်က လမ်းတွေလိုပေါ့ .. ။ တစ်နေရာသွားရင် ချောက်တွေရော ၊ ချိုင့်တွေရော ၊ ရေအိုင်တွေရော ၊ ဗွက်တွေရော အကုန်လုံးကို ကျော်ဖြတ်ြပီးမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခရီးပန်းတိုင်ကို နောက်ဆုံးရောက်တာပဲ .. ။ အဲဒီလမ်းလိုပဲ ပြင်ပလောကမှာလည်း ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရမှာပါပဲ ..။
nice report! glad to know that there are some Burmese who would step up for their rights. I wish the same for the people of Burma.
Neo Photon said...
I fully support this movement and I hope we will get our rights back from this evil government.
I'll only go back to my country only after this movement achieve. :D
http://www.padonma.com/aspire/music/English/Metallica - Turn The Page.mp3
လုပ်ပေးတဲ့သူ အားလုံးက ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်.. နိုင်ငံရပ်ခြားက ဗမာတွေ လုပ်စာနဲ့ ထိုင်စားရက်တဲ့သူတွေကိုလဲ နားလည်ပါတယ်..
ဒီလိုပါပဲ.. သူတို့တွေခမျာလည်း လုပ်မစားတတ်တော့ တောင်းစားတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်.. ပြိဿာတွေကို ဗလိနတ်စာ ကျွေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်..
နောက်မို့ဆို တိုင်းပြည်ပျောက်တဲ့သူတစ်ယောက်လဲ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ.. တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေမှာ ဒါတို့ပြည်.. ဒါတို့မြေ.. တို့ပိုင်တဲ့မြေ.. ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုလဲ ရင်နဲ့ အပြည့်ဟစ်အော်ချင်ပါသေးတယ်.. ခုတော့ အဲဒီ အသူရကယ်တွေ အတွက် အလုပ်အကျွေးပြုရတာကိုလဲ အပြစ်မမြင်ပါဘူး.. စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုလဲ အပြစ်မမြင်ပါဘူး.. သူတို့တွေ အလုပ်ပေးထားလို့ လဲ လူနဲ့သူနဲ့ တူတဲ့ဝင်ငွေ ကိုခံစားခွင့်ရလို့ပါ..
တိုက်ပွဲဆိုတာ တိုက်ရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်က အရေးပါသလို နည်းဗျူဟာ လည်းသုံသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်
ကိုလွင်မိုး ဟုတ်ကဲ့အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ခံပါများရင် ကြာရင်ပြားသွားလိမ့်မယ် .. ရသလောက် ပြန်တွန်းမှလည်းဖြစ်မယ်လေ..
Bro Neo Photon, ကောင်းလိုက်တဲ့စကား.... အဲဒီမှပြန်နော်အကို .... ပိုအိုကေတယ်..
Bro Valentino, အကိုပြောတဲ့စကားကိုတော့ လင်းအကြိုက်ဆုံး ကွန်မန့်ထဲသွင်းလိုက်ပြီ.. ကောင်းလိုက်တဲ့စကား..
အကိုစိုးဇေယျ ... အကိုပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်.. ဝေဖန်အကြံပြုတာအားလုံးကို ကျေးဇူးပါရှင်
Unbelievable!!! A girl born in military government era is very fluent in burmese language both gramma and writing skill, as well as very knowledgable about politics.Who were your teachers and from where? By the way, what are you studying in Singapore? Are you studying burmese language and politics by spending your parents' money?
To my thinking,agirl in your age studying abroad mostly in IT or business, they know nothing about burmese language writing. How long have you been in Singapore?
My comments, if you are reallya19 year old girl, loving country, fluent both english and burmese languages and full of knowledge about politics and governments works, and brave enough to talk about both Myanmar and Singapore governments, you will become very very great in age about 30 year. But, if you areafate LLKS, it is not worth for me to write this comment.
Well, I am 19 years old. That's my real age & I won't say any explaination about my age.
Im studying final year of LCCI in singapore. I am not studying politics and my mother language. You may want to know why I can write well in burmese language. Actually, I love reading since I was child so I read lots of books such as magazines, articles, novels etc.... I always write myanmar essay & I got lots of prizes when I was in ygn. That's the first step for my writing skills. Sayar U Tin Win Shin is my teacher & I learned lots of writing styles from him.
I came here in 2004 after I take BEHS exam from ygn.
Thanksalot for your feedback. If you have any more questions, don't hestitate to contact me.
Aung Sann Win said...
Though I've been here in s'pore for nearly4yrs, I still can't go back home. (You know this very well Ju Juu, don't u?) My home sweet home is still far from me. Reason? No money to pay TAX :( How can I pay tax to two governments while I still haven't settled bank loans I took to study here? Like Neo Photon said above, I CAN go back to my beloved land only after the success of this DTA movement. To get this achievement, we need every body's support cos every head & vote counts. Let me share this motivational quote here: "If you can't beahighway, just beatrail. If you can't be the sun, beastar. It isn't by size that you win or you fail, it's by being the best of whatever you are." Your eager co-operation is highly appreciated for the sake of all.
Dear Bro ASW,
Yeah I undst you well that You still can't go back your homeland.. I m so glad you wrote suchaprecious comment. We r tryingdbest to success this DTA movement & we do hope everyone support this movement. Thanks for your precious comment !!!